Ngesantya lesandi emoyeni calculator
Isandi calculator ngesantya emoyeni, ubalo intanethi ivumela ukubala isantya isandi emoyeni kwiqondo lobushushu ezahlukeneyo kwiiyunithi ezifana km ngeyure, yamayizi ngeyure, iimitha kunye neekhilogram yesibini nganye, ndawo.
Lobushushu Air ku:
iimitha / yesibini km/h Neekhilomitha/h iinyawo/s Amaqhina
Isantya epholileyo umgama ohanjiweyo ngalinye ixesha neyunithi ngumtshangatshangiso sodidi isandi ngokuthi elastic eliphakathi. Oku kuxhomekeke kwimo kwanokuxinana eliphakathi: njengesiqhelo, isantya lesandi lerhasi ngaphantsi ukuzala, kwaye ulwelo - ngaphantsi kwi eziqinileyo.
Isantya, ixesha, umgama, ubalo intanethi.
Ukubalwa (online) of isantya, ixesha, umgama kunye nezinye phakathi kwabo.
Velocity Orbital calculator ifomula
Bala velocity Orbital kwe planethi kwinkqubo elanga, okanye ngomzimba kunye ubunzima ecacisiweyo radius.
Escape calculator velocity ifomula
Bala Escape Velocity we kweplanethi kwinkqubo elanga, okanye ngomzimba kunye ubunzima ecacisiweyo radius.
Newton umthetho GRAVITATION jikelele
Bala ubunzima bezinto ezimbini, distanse kunye dibana phakathi kwabo, ngokusebenzisa umthetho Newton GRAVITATION jikelele.